Blocktix စျေး - အွန်လိုင်း TIX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Blocktix (TIX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Blocktix (TIX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Blocktix ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $149 496.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Blocktix တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Blocktix များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BlocktixTIX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00339BlocktixTIX သို့ ယူရိုEUR€0.00288BlocktixTIX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0026BlocktixTIX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0031BlocktixTIX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0309BlocktixTIX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0214BlocktixTIX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0752BlocktixTIX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0127BlocktixTIX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00453BlocktixTIX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00474BlocktixTIX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0773BlocktixTIX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0263BlocktixTIX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.018BlocktixTIX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.255BlocktixTIX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.566BlocktixTIX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00466BlocktixTIX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00513BlocktixTIX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.105BlocktixTIX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0237BlocktixTIX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.359BlocktixTIX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩4.05BlocktixTIX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.29BlocktixTIX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.25BlocktixTIX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0942
BlocktixTIX သို့ BitcoinBTC0.0000003 BlocktixTIX သို့ EthereumETH0.000009 BlocktixTIX သို့ LitecoinLTC0.00006 BlocktixTIX သို့ DigitalCashDASH0.00004 BlocktixTIX သို့ MoneroXMR0.00004 BlocktixTIX သို့ NxtNXT0.279 BlocktixTIX သို့ Ethereum ClassicETC0.000477 BlocktixTIX သို့ DogecoinDOGE1.01 BlocktixTIX သို့ ZCashZEC0.00004 BlocktixTIX သို့ BitsharesBTS0.131 BlocktixTIX သို့ DigiByteDGB0.129 BlocktixTIX သို့ RippleXRP0.0114 BlocktixTIX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00012 BlocktixTIX သို့ PeerCoinPPC0.0123 BlocktixTIX သို့ CraigsCoinCRAIG1.59 BlocktixTIX သို့ BitstakeXBS0.149 BlocktixTIX သို့ PayCoinXPY0.0608 BlocktixTIX သို့ ProsperCoinPRC0.437 BlocktixTIX သို့ YbCoinYBC0.000002 BlocktixTIX သို့ DarkKushDANK1.12 BlocktixTIX သို့ GiveCoinGIVE7.54 BlocktixTIX သို့ KoboCoinKOBO0.794 BlocktixTIX သို့ DarkTokenDT0.00312 BlocktixTIX သို့ CETUS CoinCETI10.05